Turunturada Shirka Jabuuti iyo Talaxumada TFG
Tan iyo intii burburka uu ku yimid haykalkii dowladeed iyo dadnimo ee Soomaaliyeed waxaa socday shirar taxane ah oo lagu doonayay in lagu badbaadiyo Dalka iyo Dadka Soomaaliyeed.
Shirarkaas waxay ka dhaceen goobo badan oo ay ka mid ahaayeen Itoobiya, Jabuuti iyo Kenya. Badankii shirarkaas wixii ka soo baxay waxay noqday kuwo lagu hungoobay. Sababaha loo aanaynayay dhicisowgaasina waxay ahayd iyadoo badanka shirarkaasi aanay goobjoog ka ahayd dad talo ka godo, ama hadaan hadalka si kale u dhigo looma wada dhamayn. Sidoo kale agendayaasha shirarkaasi ma ahay kuwo loogu talagalay in lagu lafaguro ama xal loogu helo xaqiiqda asalka iyo aasaaska u ah mushkilada taal Soomaaliya.
Ilaa iminka ma dhicin in shirarkaasi looga hadlo qodabada xasaasiga ah ee ay ka mid yihiin:
Dulmigii iyo xasuuqii loogaystay maatada iyo maxaysada Soomaaliyeed kuwaas oo lagu gumaaday hayb qabiil, balse danbi ay galabsadeen uusan jirin, tiradooduna gaarayso 600.000 ama ka badanba
Dhulalka ayku abtirsadaan dadka laga tirada iyo tabartaba badan yahay ee xooga lagu haysto sida Jubooyinka iyo Shabeelooyinka
Muqdisho oo ahayd Caasumad Soomaaliyeed oo cidwalba oo haybta Soomaaliyeed sheegataa ay ku lahayd hanti dhul iyo ganacsi taas oo maanta noqotay goob qabiil qudha uu sheegto dhacna lagu haysto hantidii shacabka iyo tii qaranka Soomaliyeed
Dulmigii ay dowladii Shuuciga ahayd ka gashay shacabka gobolada Waqooyi Bari iyo Waqooyi Galbeed Soomaaliya , goobahaasi oo xasuuq ba’an loogu gaystay shacab maxaysto ah iyadoo la adeegsanayo haykalkii , hubkii iyo ciidankii loogu tala galay difaaca dalka iyo dadka.
Hadaba shirarkaasi aan kor ku soo xusan waa kuwo aad uga fogaa xaqiiqda iyo xalinta khilaafaadka iyo waxa Soomaali kala tabanayso ee dulmiga iyo gabood falka ahaa ee ka dhacay dalkeena.
Shirarkaasi waxay ahaayeen kuwo in wax lagu dhoodhoobo ama boog hoosta ka huraysa korka laga dhayo oo qudha ay ula jeedadu ahayd. Balse aan marka ahayd in la soo afjaro mushkilada, lagu xaliyo khilaafaadka, lagu daweeyo dareenka, la iskala xisaabtamo, lagu xeertamo, la isku xukumo, la iska xaalmariyo dabadeedna lagu wada dhisto maamul iyo maarayn loo wada dhanyahay.
Shirarkaasi marna kama marnayn faragelin shisheeye iyo hadba qolyo dhagta wax loogu soo sheego oo lagu adeegto, kuwaas oo loo balan qaado mansab, iyo xoogaa luf-luf ah, dheef aan dhaayo sii waara lahayna la siiya.
Dagaalkii Qaboobaa Kadib (Post Cold-War):
Dagaalkii qaboobaa ee ka dhexeeyay NATO iyo WARSAW oo Ruushka iyo Maraykanku hormuudka u ahaayeen, waa kii dhibaatada maanta Soomaali taala saldhiga u ahaa maxaa yeelay burburkii ku yimid dowladii shuuciga ahayd ee Soomaalia wuxuu soo bilaabmay jabkii Soomaalida ka soo gaaray dagaalkii Ogaden, dhabarjabka dagaalkaasna waxaa sabab u ahaa Ruushkii oo Soomalida Garabkeeda ka baxay isaga iyo xulafadiisuna la soo safteen Itoobiya.
Dibin Daabyada Masar:
Kadib markii dagaalka qaboobi dhamaaday waxaa bilaabmay dagaalo kale oo doqon ma garato ah sida dagaalka khayraadka sida biyaha. Taas ayaana asal u ahayd dibin daabyada ay bilowday dowlada Masar iyadoo go’aansatay inay Soomaaliya u adeegsato burburka Itoobiya si aysan itoobiya nabad u helin dabadeedna fulin qorshayaasheeda horumarineed sida dhismaha biyo xirka wabiga Niil, taas oo dhabar jab dhaqaale iyo nololeed ku keeni karta jamaahiirta Masar.
Adeegagaasha Ereteriya iyo Cigaalayda carbeed:
Waxaa iyana xusid mudan raga u adeegaya danaha siyaasadeed ee Erateriya iyo Danaha batrool iyo istraatiijiyo ee Carbeed. Hadaba waxaan ka cudur daaranayaa inaanan si qoto dheer uga hadi doonin arinkaan maadaama aanu maqaalkaygu ku wajahnayn ilma Daahir Awaysks Asmara iyo Al-Shabaab, balse qolada Jabuuti ku shirtay un uu qoraalkaygu ku wajahan yahay.
Itoobiya oo heshay fursad qaali ah, taas oo ah in Soomaali oo kala qabsan soo kala hororsato iyagoo koox kasta waydiisanayso ganacsaar iyo hub ay ku layso hadba qolada iyo qabiilka ay hardamayaan. Taas ayaana sababtay in Itoobiya hub isugu soo dhiibto Soomali si ay isku gumaadaan, ilay iyaga kii dhintaaba waa u Soomaaliye. Waxay ka dhigtay Dalkii Soomaaliyeed gobolo ay midba dhagta ugu sheegto ama ugula faqdo saaxiibkayga keliga waa adiga.
Waxaa hubaal ah in hubka la isugu soo dhiibaa uu ka soo dego dhul Soomaaliyeed waa Berberee, waxaa kaloo xaqiiqo ah in Hub ay ku kala adkaan karaan si dagaalku u soo afjarmo aysan qolana u siin si gumaadku u sii daba dheeraado oo aan lookala xoogroonaan.
Waxay isku hubaysay Somaliland iyo Puntland gaar ahaan dagaalkii laascaanood, waxay isku soo hubaysay Morgan iyo Mooryaan, RRA iyo USC, Masale iyo Itixaadkii Gedo iwm……
Soomaalidu waxay tiraahdaa mayd keebaa ugu danbeeyay, markaasaa la yiri “kaa la sii sido”
Waxaan oran karaa Soomaalidu waa umul aan garan dhibka iyo xanuunka soomaray , mana nihin ummad ku wax qaybsada dhacdooyinka iyo masiibooyinka.
Sidaa awgeed waxaan aamin sanahay in dhibkii hore ee dhacay uu ka badnaandoono hagardaamada iyo hadimada ay dowlada itoobiya maanta la damacsan tahay Soomaali. Sababtoo ah waxay itoobiya ku fashilmatay siyaasadeedii hagardaamo iyo gumaadkeedii milateri intaba.
Waxaan kaloo nasiibdaro ah in dadkii ku andacoonayay dagaal iyo jihaadbaan wadnaa oo itoobiyaan dalka ka saaraynaa inay iyagii maanta yihiin aalada iyo kuwa lagu burburinayo haykalkii iyo qaranimadii Soomaaliyeed, laguna sii kala fogaynayo fursad heshiis ee ka dhalata Soomaaliya.
Turunturada Shirka Jabuuti
Maaha markii koobaad ee shirkii Soomaaliyeed Jabuuti lagu qabto. Labo shir oo laba dowladood lagu soo dhisay baa ka dhacay labadaas dowladoodna hogaanka talada gacanta loogaliyay Cali Mahdi iyo Cabdisaaam Qaasim oo labaduba ka soo wada jeeda beesha Soomaaliyeed ee Hawiye ku abtirsata. Labadaas dowladood ciribtoodiina waxay ahayd iyo asbaabtii burburiyayna dhamaanteen waan ka dharagsanahay.
Hadaba akhristow waxaa su’aal furan iga ah, qolada shirka jabuuti maanta ka qaybgashay miyaysan ku wax qabysan labadasaas dhacdo, muxuuse shirka maanta uga duwan yahay labadaas shir ee hore. Waxaanba oran karaa labadii shir ee hore ayaa ka dad badnaa dhinac tiro iyo tayaba. Sidoo kale dhamaan qabaa’ilada Soomaalieed iyo xubnaha bulshada ee kala duwaniba dad baa ka joogay.
Hadaba hadii shirkaan loo eego kuwii hore:
Miyaysan dhab ahayn in beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo qudha ay qabsatay shirka. (fadlan fiiri shaxda hogaanka shirka: Shariif iyo Nuur Cadde oo jifo hoose wada ah, waxayna u wakiisheen saxiixa shirka Axmad Cabdisalaam iyo C/raxmaan C/shakuur oo isku jifo hoose ah , ragaas afarta ahina dhamaan waxay kuwada abtirsadaan hayb qudha. Hadaba sidee suurto gal ku noqon kartaa in beelaha kale ee aan egrada ku lahayni ku qanacdo heshiis aysan qayb ka ahayd , talo ku lahayn, wax ka gorfayn ay go’aankiisa qaadato. Miyaysan mustaxiil ahayn.
Miyaysan dhab ahayd in go’aamada ay ka midka tahay kordhinta xubhana baarlamaanku ahayd jilaafo iyo burbur hor leh. Timirtii horeba dab loo waa!!!! Baarlamaankii TFG ayaaba iska daa mushahaar iyo goob ay ku shiraan ama ku hoydaane helaane, tigidhadii ay ku imin lahaayeen Baydhabo loo la’yahay.
Miyaysan labada garab ee heshiiska gaaray ahayn kuwo aan taloba gacanta ugu jirin. Deegaan wayn oo ay ku gorgortamaan iyo awood wayn oo nabad dhalinkarta lahayn.
TFG waxaa loo arkayay dowlad u istaagi doonta inay ka saarta dalka dhibaatada, inay midayn doonto shacabka Soomaaliyeed ee dagaalka iyo dayacu dilooday. Laakiin nasiib daro taladoodii waxay ka dhamaan wayday is qabqabsi iyo isku qayilis, taas weeye tan maanta meesha xile dhigtay. Waxay garan waayeen fursada dahabiga ah ee ay haysteen taas oo ahayd inay heshiisiin dab ah sameeyaan, dalka gudihiisa qolo qolo isugu yeeraan, xubin karsa oo baarlamaanka ku jirta u diraan deegaankiisa si uu usoo dumo dadkiisa, dabadeedna shirwayne runta la isugu sheego dhaco si nabad waarta loo helo. Inay gobolkasta u daayaan dadka u dhashay inay iska soo dhex doortaan maamul ay ku qanacsan yihiin dhamaan qabaa’ilada kala duwan ee ood wadaagta ah. Inay xoreeyaan dadka laga tirade badan yahay deegaamadooda xooga iyo dulmiga lagu haysto, inay Somaliland la shiraan kuna soo dabaalaan Federation iyo in cidkastaa xor u noqon doonto arimaha daakhiliga ee gobolkeeda.
Nasiib daro way ku fashilmatay howlahaas aasaasiga ahaa, fashilkaasna eedeeda masuuliyiinta TFG iyo xubhaha baarlaanka ayaa qaadaya walow ay dhibka qayb ka ahayd jilaafada Itoobiya, dagaalada Shaatiga diinta loo soo xidhay, Habacsanaanta wadama Caalamka, iyo Habisada, dhaqaale xumo, ciidan amni la’aan iyo wadaniyad xumada Shacabka Soomaaliyeed.
Afeef: Aragtida qoraalkan wxaa leh oo uu u gaar yahay qoraaga ku saxiixan